Bhadhara Pepa Rekutsvagisa ||
Bhadhara Pepa Rekutsvagisa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva kune rakanyanya Kubhadhara Pepa Rekutsvagisa mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Vanhu vazhinji vane chinetso chekubhadhara mapepa ekutsvagisa uyezve kunetsekana uku kunogona kukonzera kushushikana kune iye munhu ari kuyedza kuwana iyo mari. Mune zvimwe zviitiko, munhu wacho anofanirwa kufunga nezve sarudzo yekuwana mari kuburikidza nekwaanobuda uye haazodi kutora basa rekugadzirisa chinhu ichi chehupenyu hwake. Izvi zvinogona kusanganisira chikwereti chemari uye izvo zvinogona kunge zviri zvishoma zvekubheja, kunyanya munguva dzino dzehupfumi.
Aya ese mabasa avo ezvidzidzo. Ichi chinhu chinofanirwa kuitwa nemunhu kuti agone kubudirira mune yavo yakasarudzwa nzvimbo yekudzidza.
Chimwe chezvinhu icho mudzidzi anofanirwa kufunga kana vachitsvaga nzira yekubhadhara mabasa ezvidzidzo kuwana rubatsiro. Izvi zvinogona kuwanikwa kubva kuhurumende kana chinzvimbo chedzidzo yepamusoro uye rubatsiro rwavanopa runogona kubatsira zvikuru.
Dambudziko rinomuka nerudzi urwu rwemari nderekuti pane zviwanikwa zvishoma izvo munhu anogona kunyorera, kuti awane yavo yekutsvaga mapepa. Mune zvimwe zviitiko, ivo vanofanirwa kutarisa kune dzimwe nzira dzemari. Izvi zvinogona kusanganisira kudzidza basa kana internship izvo zvinogona kuvatendera kuti vawane ruzivo mumunda wavo. Mune zvimwe zviitiko, vangangoda kutanga kushanda pamba kana kune dzimwe nzvimbo dzisina kujairika kuti vakwanise kudzidza zvakawanda nezvenyaya yekutsvaga kwavo.
Kune iye munhu anoda kugashira mari muchimiro chemubhadharo, vangangodawo kufunga nezve kuwana rumwe rudzi rwehurumende rubatsiro. Kune akasiyana zvirongwa zvechipo izvo zvinobvumidza munhu kuti agamuchire imwe mari yemari yekubhadharira yavo research.
Izvi zvinosanganisira mashoma emhando dzakasiyana dzezvikwereti, asi zvinogona kukuremedza kufunga nezvekubhadhara. Vanogona kunge vari mari yakakura kwazvo uye munhu anogona kunge asina zano rekutangirawo. Chinhu chega chavanogona kuita kutarisa kumwe kunowanikwa mari uye voona sarudzo dzavanadzo. Kuti vazviponese imwe nguva, vanofanirwa kutanga kutarisa-tarisa kuzvikoro zvakasiyana kana kumawebhusaiti ehurumende anopa urwu rubatsiro.
Kana zvasvika pakubhadhara mapepa ekutsvagisa, chakakosha ndechekuchengeta mupfungwa kuti izvi zvinoda imwe chiyero chekuedza kune iye munhu. Kana ivo vachida kuisa mukuedza kuti vawane mari idzi, vanozopedzisira vagamuchira iyo mhando yerutsigiro iyo yavari kutsvaga.
Kunyange paine dzakasiyana siyana sarudzo dziripo dzekubhadhara mapepa ekutsvagisa, vanofanirwa kuve nechokwadi chekutora nguva yekutsvaga sarudzo idzi kuti vawane zvavanogona kushandisa pane zvavanoda. Ichi ndicho chinhu chinofanirwa kuedza kuitwa nemunhu kuitira kuti abatsire kusaora moyo kana achiedza kutsvaga mabhadharo emapepa avo ekutsvaga.
Kutanga, ivo vanofanirwa kushanyira dzakasiyana siyana saiti saiti uye kutsvaga kwakatenderedza kune izvo zvikwereti zvinoenderana nezvavanoda. Kune mhando dzakasiyana dzezvipo dzinogona kushandiswa nekuda kwemari iyi. Kune akatiwandei akasiyana mapoka aunogona kunyorera uye mune dzakawanda zviitiko ivo vanopa akasiyana mari yemari. Kana ivo vachikwanisa kuwana mari yezvese zvavanoda, ipapo vanozove nemari yakakwana yekubhadhara yavo yekutsvaga.
Kune avo vasingakwanise kuwana mari yavanoda, vanofanirwa kutarisa mune dzimwe nzira dzekubhadhara mapepa avo ekutsvaga. Ivo vanofanirwa kutarisa mapurogiramu akasiyana uye voona kuti nderupi rubatsiro rwuripo.
Kana vasingakwanise kubhadhara mapepa ekutsvagisa vega, saka vangangoda kufunga nezvekuwana rumwe rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. Kuti vagamuchire urwu rubatsiro, vanofanirwa kuzadza chikumbiro chinovabvunza rumwe ruzivo. Mushure mekunge vaendesa chikumbiro, vanofanirwa kumirira kuti vanzwe kubva kusangano rehurumende rakapa rudzi urwu rwemari.
Kune zvirongwa zvehurumende zvinobatsira vanhu vakaita seni neni uye aya masangano anokwanisa kupa mari yatiri kuda. Ivo vachatibatsira kubhadhara mapepa ekutsvagisa atinoda uye ayo isu tinokodzera. Pane zvinhu zvakasiyana zvatingaite kuti hurumende yedu irambe ichishanda.